avril 2018 - Page 3 sur 79 -
Ny alarobia ho avy izao no hisokatra amin’ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana voalohany amin’ity taona ity, izay tontosain’ ireo solombavambahoaka araka ny voafaritry ny lalàm-panorenana. Mandritra izany anefa dia mitohy ihany ny hetsika izay …Tohiny
Mazava ny an’ireo depioten’i Madagasikara maro an’isa, miisa 79. Nambaran’ireo solombavambahoaka nisolo tena azy ireo tany Faratsiho, ny zoma 27 avrily teo nandritra ny lanonana fametrahan’ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina ny vato fototra manamarika ny fanombohana …Tohiny
Tsy misy hafa tamin’ny fanakorontanana nisy teto amin’ny firenena hatramin’izay ny zavatra ataon’ireo mpanakorontana ankehitriny. Saika teo amin’ny kianjan’ny 13 Mai no nitondran’ireo mpanao politika ny vahoaka, ary nanaovana sorona azy ireo tamin’ny taona 1972. …Tohiny
Fikambanan’ny tanora : Aoka izay ny fambolena krizy manakorontana firenena
28/04/2018 admintriatra 0
Mpikambana 14 no indray nampiara-peo omaly niantso amin’ ny tokony hisian’ny filaminana eto amin’ ny firenena, sy ny tokony hampitsaharana ny krizy izay niverimberina tato anatin’ny folo taona izay. Ireo fikambanana ireo dia ahitana ireo …Tohiny
Tsy nanaraka ny lamina. Niverina indray ny trangana fanafihana tany amin’ny lalam-pirenena faha-4 mampitohy an’Antananarivo sy Mahajanga. Ny alin’ny zoma lasa teo, tany Tsaramasoandro distrikan’Ankazobe dia taksiborosy miisa sivy nifanjohy (caravane) no indray notafihan’ny jiolahy ...Tohiny
Tetezana Farahantsana : Nitombo indray ny fotodrafitrasa vita